बिनाले भेट्न गएकी कु.शुमको घरबाट आयो यस्तो भिडियो, त्यो दिन खास भएको थियो यस्तो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 11, 2021 AdminLeaveaComment on बिनाले भेट्न गएकी कु.शुमको घरबाट आयो यस्तो भिडियो, त्यो दिन खास भएको थियो यस्तो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की सुजिता भण्डारी मृ.त अवस्थामा भेटिएको घ’टनाले चितवन तातिरहेको बेला चितवनबाट नै अर्की एक युवती हराएकी छिन् । सुजिता भण्डारी घ’टनाको अनुसन्धानमा लागेको प्रहरीलाई फेरी अर्को त्यस्तै प्रकारको घटना आएको छ । गैंडाकोटको जनक कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका – ४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १४ गतेदेखि बे.पत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ ।
परिवारका अनुसार असार १४ गते दिउसो आधा घण्टामा घर फर्किन्छु भनेर साथिसंग निस्किएकी बिना अहिले सम्म फर्किएकी छैन । परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका–४ का प्रवेश कँडेललाई प’क्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर अहिले सम्म बिनाको अवस्था थाहा नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गैँडाकोट इलाका प्रहरी कार्यालय, चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिनाको खोजीमा जुटेको जयश्वरले बताए । बिनाको बुबाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा लिखित जाहेरी दिएर छोरीको खोजी गर्न अनुरोध गरेका छन । बिना गा.यव भएको आज ११ दिन भैसक्दा पनि केहि खबर आएको छैन । बिना बे.पत्ता हुनु अगाडी उनका प्रेमी र उनको दोस्रो प्रेमिका भनिएका कु.सुमसंग अन्तिम पटक देखेका स्थानीयहरुले त्यो दिनको घ’टना मिडिया सामु बताएका छन ।
उनीसंग गरिएको कुराकानी यहाबाट हेर्नुहोस्ः